အထူးသဖြင့်အလုပ်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း၊ အိပ်ရာမှနိုးခြင်းသည်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ၊ အလုပ်များ၊ လေ့လာမှုများနှင့် ထပ်မံ၍ စတင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုယူဆပြီး ထပ်မံ၍ ခံစားမိသည်။
သို့သော်ထိုကောင်းသောခံစားမှုသည်ကြာရှည်ခံပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အားစွမ်းအင်ဖြင့်ဖြည့်တင်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်နံနက်စာကောင်းကောင်းစားရန်မျှော်လင့်ချက်ကြီးမားသောအပြုံးဖြင့်ဘဝကိုရင်ဆိုင်ရရုံတင်မကဘဲပိုမိုကောင်းမွန်သောအပြုသဘောဆောင်သောအောင်မြင်မှုရရှိစေရန်လည်းအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ငါတို့နှင့်ငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများအတွက်မည်မျှအရေးကြီးသည်ကိုသတိပေးသောငါတို့ဘက်မှ၊ အကယ်၍ ငါတို့အတွက်မဟုတ်လျှင်၊ ဘဝသည်ကွဲပြားခြားနားလိမ့်မည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်ဤစကားစုအချို့ကိုအလွတ်ကျက်။ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်သောသူထံအပ်နှံခြင်းကသူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်ထောင်စုကိုထပ်မံခိုင်မာစေရန်နှင့်ခိုင်မာစေရန်ပင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေ့သူမအပေါ်ထားရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များကိုဖွင့်ပေးလိုက်သည်။
သင်၏မျက်စိကိုဖွင့်သောအခါစကားစုကိုပြောရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းအပြင်၎င်းသည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုနေ့စဉ်စကားစုတစ်ခုဖြင့်အံ့အားသင့်စေသည့်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည့်အကြံတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။ နံနက်စာစားရန်ယူမည်ဟုသိထားသောနောက်လက်သုတ်ပုဝါတွင်ရေးပါ၊ သို့မဟုတ်အိမ်သာစက္ကူတွင်စက္ကူအပိုင်းအစတစ်ခုဖြင့်ထားသောစာပိုဒ်တိုပါသည့်စက္ကူအပိုင်းအစတစ်ခုကိုကားထဲတွင်သင်ယူတော့မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။ အဲဒီလူကသင့်ကိုနေ့တိုင်းဘယ်လိုအံ့အားသင့်စေသလဲဆိုတာကြည့်ဖို့စောင့်နေတာဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်။ ငါ့ကိုယုံပါ၊ စုံတွဲတွေအားလုံးကိုစည်းလုံးစေတယ်။ ပြီးတော့သူတို့မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးတစ်ခုနဲ့တစ်နေ့လုံးမှတ်မိနေလိမ့်မယ်။ အသစ်ပြန်လည်စွမ်းအင်နှင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါပိုပြီးခွန်အားပေးပါ ... အခြားရွေးချယ်စရာမရှိ။
“ ဘဝကမင်းနဲ့အတူနေဖို့အချိန်မလုံလောက်သေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါလည်းမျှော်လင့်ချက်ပျောက်မသွားဘူး။ ပြီးတော့ငါ့ဘ ၀ မှာမင်းလိုမင်းနဲ့အတူနေ့တိုင်းဟာတစ်ချိန်တည်းမှာတိုတောင်းပြီးအဆုံးမဲ့ပုံရတယ်။ မင်္ဂလာပါ၊ ယနေ့သင်လိုချင်တာမှန်သမျှရရှိပါ။
မင်းရဲ့အိပ်မက်ကိုငါနှိုးလိုက်ပြီ၊ မင်းကငါစိတ်ထဲမှာရှိနေဆဲပါ။ ကောင်းသောနံနက်အချစ်
"ငါပျော်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါနိုးလာတဲ့အခါမင်းဟာငါ့ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရမိတယ်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါအချစ် မင်းကိုချစ်တယ်"
ငါနိုးသောအခါသင်အောက်မေ့စရာဘို့ငါ့ကိုရှုတ်ချ။ ၊ ကောင်းသောနံနက်အချစ်
“ မနက်တိုင်းမင်းနိုးလာတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်ငါပြုံးလိုက်ပြီးမင်းကငါ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ပါ။ မင်းကငါ့ကိုစွမ်းအားပေးတယ်။ နူးညံ့ပြီးနူးညံ့တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့စိတ်နှလုံးတိုင်းမှာမင်းကိုငါထင်တယ်”
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်နံနက်ခင်း၌ကျွန်ုပ်၏ကောင်းသောမနက်ခင်းစာကိုမပို့ပါကကျွန်ုပ်တစ်နေ့လုံးပျောက်ဆုံးနေသည်ဟုခံစားရသည်။ ကိုယ်မင်းကိုလွမ်းတယ်အချစ်ရေ "
“ ဘဝကငါတို့ကိုနေ့သစ်တစ်ခုနှင့်အတူကောင်းချီးပေးနေသည်။ ဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုဒီလက်ဆောင်ပေးဖို့အလုံအလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာအံ့သြစရာပဲ။ မင်းမျက်လုံးတွေကိုဖွင့်ကြည့်ပါ။
“ ပန်းအချို့သည်သင့်ကိုကျွန်ုပ်ချစ်တယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။ မင်းကိုပြုံးပြမယ်ဆိုရင်မင်းကိုငါသဘောကျတယ်ဆိုတာမင်းသိရင်မင်းမျက်ရည်ကျတာကိုငါပြမယ်။ မင်းအကြောင်းတွေးနေတယ်
“ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအပျော်အပါးတွေနဲ့နေ့စဖို့မင်းရဲ့အနမ်းနဲ့ငါ့ပွေ့ဖက်ခြင်းကိုအဝေးကနေရယူလိုက်ပါ။ မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါမင်းသမီး"
“ မိုင်ပေါင်းများစွာကကျွန်တော်တို့ကိုသီးခြားစီနေခဲ့ကြပြီးငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးနေရောင်ထွက်လာတာကိုအတူတကွရှိနေစေချင်တယ်၊ နောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ရင်မင်းကိုငါခွန်အားကြီးစွာနဲ့ဖက်လိုက်မယ်၊
"မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါမင်းသမီး။ မင်းဟာငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖြတ်သန်းခဲ့ရဖူးတဲ့အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးမင်းဟာငါ့ကိုအရမ်းပျော်ရွှင်စေတာကိုမင်းသိဖို့ဒီစာကိုငါရေးနေတယ်။ အားလုံးပုံပြီးချစ်တယ်"
နေရောင်သည်မြေကြီးကိုလင်းစေသကဲ့သို့သင်၏မျက်စိသည်ငါ့နှလုံးကိုလင်းစေတတ်၏။ မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါမင်းသမီး! "
“ မင်းရဲ့ပြတင်းပေါက်ကိုတက်ပြီးမနက်တိုင်းမင်းအခန်းထဲဝင်လာပြီးမင်းဘေးနားမှာနိုးလာနိုင်မယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုဤလောကအတွက်ငါ့ကိုအပျော်ရွှင်ဆုံးစေသည်ကားအဘယ်သို့။ မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါမင်းသမီး"
နံနက်တိုင်းငါနိုးလာတဲ့အခါမင်းရဲ့ပထမဆုံးအတွေးကမင်းပဲဆိုတာငါသိတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုတစ်နေ့တာအသက်ရှင်ရန်ငါ့ကိုစွမ်းအင်ပေးသောအရာကိုဖြစ်ကြသည်။ မင်းအသက်ရှင်ဖို့ငါ့အကြောင်းပြချက်ပဲ မင်းသမီးမင်းကိုငါအရမ်းချစ်တယ်။
“ နိုးထတာ၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုမခံစားနိုင်ဘူး၊ ငါ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာပြီးမင်းဟာငါ့ဘဝမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ။ မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါမင်းသမီး"
"အချစ်ရယ်၊ နိုးထဖို့အချိန်တန်ပြီ။ မင်းရဲ့နားမှာတီးတိုးတိုးတိုးပြောပြီးမင်းအနားမှာရှိနေစေချင်တယ်။ မင်းရဲ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ရက်နဲ့မင်းကိုငါလွမ်းနေတာငါပျောက်ဆုံးနေမယ်လို့မင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ "
"ဒီနေ့ဟာအတိတ်ကိုမေ့ပြီးငါတို့အတူတကွရှိနိုင်မယ့်အနာဂတ်အတွက်အသက်ရှင်နေထိုင်မယ့်နေ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ အချစ်အတွက်အချစ် "
"မင်းခံစားရတယ် ဟုတ်လား နံနက်ယံ၌ထ။ သင်တို့သည်ငါ၏လူဖြစ်ကြောင်းကို၎င်း၊ ငါသည်သင်တို့၏ဥစ္စာဖြစ်သည်ကို၎င်း၊
မနက်ခင်းမှာမင်းပြုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့။ အိပ်ယာထဲမှာမင်းအနားကနိုးလာတာငါတစ်ယောက်တည်းဖြစ်ချင်တယ်။ မင်းကိုမနက်စာကျွေးဖို့တစ် ဦး တည်းဖြစ်ချင်တယ် နင်ကောင်းသောနံနက်ခင်းပြောရန်သင်နမ်းသူတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်ချင်သည်။ သို့သော်ထိုပြည့်စုံသောနေ့ရက်များမရောက်မချင်းကျွန်ုပ်သည်နံနက်တိုင်းသင့်ကိုသတိရနေမည်။ ထိုစုံလင်သောနေ့ရက်များမရောက်မချင်းကျွန်ုပ်သည်သင့်ကိုစိတ်စွဲမှတ်စေရန်နမ်းခြင်းနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းများကိုပေးပို့သည်။
"မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလှလှပပ။ ဒီနေ့ငါနိုးလာပြီးမင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့သင့်ကုမ္ပဏီကိုငါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာဘယ်လောက်ပျော်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ ငါနိုးလာပြီးငါ့ရဲ့စိတ်ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်အဖြစ်သင့်မျက်နှာကိုပေါ်လာတဲ့အခါကမ္ဘာပေါ်မှာကံအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ် "
"မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလှလှလေး။ ငါ့ဘ ၀ ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နှစ်ယောက်သက်ရှိထင်ရှားတွေအများဆုံးအဖြစ်အပျက်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့သလဲဆိုတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"
ငါ့နံနက်ခင်းကိုအံ့ to ဖို့ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ခြေလှမ်းငါးခုကမင်းသိလား။ ငါမျက်စိကိုဖွင့ ်၍ အသက်ပြင်းပြင်းရှူသည်။ စာရွက်များကိုပြန်ဆွဲထုတ်သည်။ ထသည်။ "မင်္ဂလာနံနက်လှလှပပ" ၏သတင်းစကားကိုရေးသည်
"မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလှလှပပ။ ငါပြaနာရှိနေတယ် ငါနှလုံးသားကိုယူသောသူခိုးနှင့်ချစ်မိခဲ့သည်။ ငါမင်းကိုအစီရင်ခံသင့်သလား။ "
ကမ္ဘာကြီးကတစ်ဖန်မွေးဖွားလာပေမယ့်မင်းကိုချစ်တဲ့အချစ်ကငါအိပ်ရာဝင်ချိန်နဲ့မတူပဲ၊ ငါနဲ့တွေ့ရင်အတူတူပဲ။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းအချစ်ရေ
မကြာခင်နေထွက်လာပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ဖို့၊ ပျော်မွေ့ဖို့နဲ့ချစ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ရက်ကျတော့မယ်ဆိုတာသိရလို့ကျွန်မအရမ်းပျော်တယ်။ နောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါအချစ်လေး။
“ ဒီနေ့ဟာပျော်ရွှင်နိုင်ပါတယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုပြproblemsနာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်၊ အကြီးမြတ်ဆုံးအောင်မြင်မှုဒါမှမဟုတ်အဆိုးဆုံးစိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုအရာအားလုံးပေးနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ငါကငါ့အနားမှာငါရှိပါကအရာအားလုံးကောင်းလိမ့်မည်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါအချစ်လေး။
“ နံနက်တိုင်းအလုပ်သွားဖို့စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းကိုစိတ်ထဲထားရှိခြင်းကအရာရာတိုင်းကိုပိုပြီးလွယ်ကူစေသည်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါအချစ်လေး။
ဒီနေ့ဟာသင်အချိန်အတော်ကြာရှိခဲ့သမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်းကမင်းကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားမိတာကငါဟာသတ္တ ၀ ါတွေအားလုံးလိုပဲကောင်းလိမ့်မယ်။ ကောင်းသောနံနက်အချစ်ရယ် "
"မင်းကိုငါ့လက်ထဲမှာထားခဲ့လို့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့" မင်္ဂလာနံနက်ခင်းနှလုံး "ပါတဲ့သတင်းစကားကမင်းရဲ့နေ့ကိုတောက်ပစေချင်ရုံတင်မကဘူးနင်ငါနိုးလာတဲ့အချိန်မှာငါထင်ခဲ့တဲ့ပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ "
"မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ ငါသာမင်းကိုကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်စေချင်တယ်။ နိုးလာတဲ့အခါငါပထမဆုံးစဉ်းစားမိတာကိုအတည်ပြုဖို့
"ချိုမြတဲ့အနမ်းကိုဘယ်သူ့ကိုမှပေးနိုင်တယ်။ နှစ်ခုကိုအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသူများကပေးသည်။ မင်းသူတို့ကိုညနေမနက်အထိပေးမယ် မင်္ဂလာနံနက်ခင်းလေး
"မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ ဘာလဲသိလား? ယနေ့တောက်ပသောနေနှင့်အတူလှပသောနေ့။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည့်အရာမှာကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့နေ့တိုင်းငါ့ကိုအလင်းနဲ့ပြည့်စေတယ်။ မင်းကိုချစ်တယ်"
သင်၏မျက်စိတို့ကိုဖွင့်လော့။ ငါနင့်ကိုအနမ်းတွေဖြည့်ပြီးမင်းကိုဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာတိုးတိုးလေးပြောချင်တာပါ။ ငါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။
"မင်္ဂလာပါအမျိုးသမီးများနှင့်လူကြီးလူကောင်း ကျွန်တော်တွေ့ဆုံဖူးသမျှထဲမှာလှပဆုံးအမျိုးသမီးကိုမင်္ဂလာမနက်ခင်းလိုချင်ပါတယ် သူမသည်လှပပြီးကြင်နာတတ်သူ၊ နှိမ့်ချသူ၊ ရိုးသားသူ၊ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ
ဒီသတင်းစကားကမင်းကိုဘဝမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေထဲကအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရစေဖို့ပဲ။ ဒီနေ့မှာမင်းရဲ့ဆန္ဒအားလုံးပြည့်စုံလာဖို့သင်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ
“ ငါဘ ၀ ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြန်လည်ခံစားနိုင်ဖို့နိုးနိုးကြားကြားရှိခဲ့တယ်၊
"နင်ကငါ့စကြ ၀ ofာရဲ့ဗဟိုပဲ၊ မင်းရဲ့အိပ်မက်ကိုမက်ပြီးမင်းရဲ့နံဘေးမှာနိုးပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ"
"မင်းကိုငါအရမ်းချစ်တယ်။ အိပ်မပျော်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့်မင်္ဂလာပါလို့မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြောပြနိုင်ဖို့အတွက်ငါစောစောထဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်"
ငါ့မျက်စိဖွင့်ပြီးမင်းအနားမှာတွေ့တာထက်ငါ့ကိုပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့ဘာမှမရှိဘူး။ မင်းကငါ့ကိုဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်စေတဲ့သူပဲ။ ဒါကြောင့်မင်းသမီးကိုမင်္ဂလာမနက်ခင်းမှာမင်းစကားပြောဖို့ငါငြီးငွေ့မှာမဟုတ်ဘူး "
မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကငါ့ကိုနေရောင်ခြည်ထက်အလင်းရောင်ပိုပေးစေတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့မျက်လုံးတစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့ကိုခံစားနိုင်ဖို့ကျွန်မလိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုရနိုင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါမင်းသမီး"
"မင်္ဂလာမနက်ခင်းမင်းသမီးလေး၊ နေ့ကစတင်ပြီးပြီ၊ ငါတို့အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရမယ်"
အချစ်ဆိုတာနိုးထဖို့အချိန်တန်ပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာပြည့်စုံတဲ့နေ့ကိုပျော်မွေ့ဖို့အတွက်မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကိုလိုအပ်နေတယ်။ မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါမင်းသမီး"
“ မမေ့နိုင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုသင်ခံစားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီမက်ဆေ့ခ်ျနဲ့မင်းကိုမင်္ဂလာမနက်ခင်းမင်းသမီးလိုချင်ရုံသာမကပဲစက္ကန့်တွေကနာရီနဲ့တူအောင်ရပ်တန့်သွားအောင်အမြန်ဆုံးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မြင်နိုင်အောင်လည်းလုပ်ပေးလိမ့်မယ်”
"မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ မင်းမှာပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့နေ့တစ်နေ့ရှိလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်းကိုအမြဲတမ်းငါအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေမှာပါ။
မင်းကိုငါစာရေးလိုက်တာပဲနော်။ နင့်ကိုသတိရဖို့ပဲငါရေးခဲ့တယ်၊ မင်းဟာငါ့ဘ ၀ မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။
ငါတောင်ပံတွေထမ်းပြီးမင်းအနားမှာနေ့တိုင်းနိုးထနိုင်ဖို့ငါဘယ်လိုဆန္ဒရှိလဲ။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အဖိုးတန်မျက်စိတွေကိုငါဖွင့်လိုက်တာနဲ့မြင်နိုင်တယ်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ
"မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ သင့်အိပ်မက်ကိုမင်းအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်၊ နင်ငါတကယ်နင်ဝမ်းသာနိုးလာတာကိုငါသတိရစေချင်တယ်၊
"မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ လမ်းပေါ်မှာအေးပေမယ့်လည်းငါအရမ်းပူနေတယ်ဆိုတာမင်းသိဖို့လိုတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကနေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့နွေးထွေးမှုကိုပေးတယ်။ "
ပြProbleနာများ၊ အလုပ်များ၊ အခက်အခဲများ၊ စိတ်ပျက်စရာများ…သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအတူတကွခံစားနိုင်ရန်အတွက်သင်၏လက်ထဲတွင်ရှိနေနိုင်ခြင်းကိုသာစဉ်းစားသောကြောင့်၊ သင်၏အနားရှိအရာအားလုံးသည်သေးသေးလေးတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ငါပထမ ဦး ဆုံးမိနစ်ကနေကောင်းသောမင်္ဂလာနံနက်ခင်းကိုလိုချင်ပါ၏
"မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ခေါ်ဆိုမှုဘယ်တော့မှမပျောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမိုးတိမ်စီးနေတုန်းပဲ။
“ ဘဝဟာမင်းအနားမှာတကယ်တိုတောင်းနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အနားမှာမရှိဘဲတစ်စက္ကန့်ကိုမဖြုန်းချင်ဘူး။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ "
“ ငါနင့်ကိုနင့်နင့်နင့်နင့်နင့်အနားမှာမနေဘူးလို့ထင်ခဲ့ ဒါပေမယ့်မင်းကိုတွေ့တော့ငါတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာပြိုကွဲဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ "
“ နင့်ကိုအဖိုးတန်တဲ့ဆန္ဒရှိဖို့နိုးထဖို့ကျွန်မမျှော်လင့်နေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာမင်းအိပ်မက်မက်နေတာလားအိပ်မပျော်ဘူးနင့်ကိုနင့်အနားမှာရှိနေတဲ့နာရီတွေကိုရေတွက်ရင်းနိုးလာတယ်။ အချစ်ရေမင်းကိုချစ်တယ်"
ပြီးတော့ခင်ဗျားသိပါတယ်၊ မူရင်းသဘောအရအရသာဆိုတာဒါပါ။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထဲဝင်တဲ့နေရာတွေ၊ နံနက်တစ်လျှောက်လုံးသူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကိုဒီစာသေးသေးလေးတွေနေရာတိုင်းမှာထားနိုင်ဖို့စဉ်းစားလို့ရတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်တစ်နေ့ကိုစာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်သုံးရန်မတိုက်သင့်ပါ။ သို့မဟုတ်လျှင်အလွန်အကျွံအလွန်အကျွံဖြစ်လာခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ကိုသာဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » အကောင်းဆုံးနံနက်ခင်းစကားစုများကိုသိထားပါ
သူတို့ကိုငါရေးချမည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားဤမှစာသားတစ်စောင်ပို့ပေးလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားနောက်ဆုံးပို့ပေးလိမ့်မည်။ 😛